Talooyin Dhibaatooyinka aad DVD Drive Dhibaatooyinka
> Resource > Video > The DVD Drive Dhibaatooyinka Common
Intee in leeg ayaad ku ogaan saabsan DVD ciyaaryahanka ama la wado?
Waxaan rumeysan yahay waxaa jira dad badan oo naga mid ah kuwaas oo ka xumaa sida DVD drive ama ciyaaryahan ka hor. Ha u ahaato ciyaaryahan standalone DVD ama ka dhisay-in DVD drive gal kombiyuutarada ama laptops, waxaa weli u nugul arrimaha yar oo la mid ah isla. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka DVD ah si fudud loo xallin karaa ama lagu hagaajin karaa. Sida kuwa kale, waxaan u baahan tahay in waqti waxoogaa yar oo dheeraad ah oo ay u badan tahay qaataan ugu qiimaha kharaj maal yar si ay u bartaan qalabka loo baahan yahay. Si fudud u akhri infographic ku lifaaqan ee dhibaatooyinka DVD drive caadi ah kala kulantay ee deelqaaf ah, sababta iyaga iyo xal la heli karo keenaya.
Haddii aanad weligaa isku dayeen in ay nadiif ah oo aad disc u gaar ah, markaas waa ka xigmad in ay ka baxaan in ay gacmaha ka mid ah uu ka qibrad badan. Haddii kale, waxaad si fudud u gadan kartaa disc nadiifinta iyo aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa geli ciyaaryahan DVD ama la wado oo bilaabi doonaa nadaafadda si toos ah. Disc nadiifinta laftiisu tuurid doonaa marka ay dhamaystaan.
Sida xira your computer ama laptop in an drive dibadda adag; cable USB ah ayaa laga yaabaa in la dabacsan ama dhaawac iyo halkan, fariin qalad ah bandhigay on your shaashadda. Waxaad isku dayi kartaa in ay xiriir la yeeshaan cable oo dheeraad ah USB ka saaxiibadaa ama isku day in aad furaysto cable isla galay USB dekedda kala duwan . Inta badan, waxaa furfuraya qarsoodiga ay isku dayayaan in ay su'alaha baxay aasaasiga ah.
Iyadoo ku xiran brand iyo model ah DVD ciyaaryahan ama wadid aad, waxa kale oo aad eegi kartaa wixii updates suurto gal ah in ay u hortagi yaabaa in ay ka shaqayso sidii la rabay. Fadlan double-hubi nidaamka qalliinka of your computer ama laptop waqti isku mid ah.
The DVD abuura kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan, shakhsiyeeyo iyo DVD kuu gaar ah gubi. Haddii aadan awoodin in ay ku xidhmaan aad drive dibadda u adag, waxaad had iyo jeer karaa gubi DVD ah ka mid ah ururinta aad file warbaahinta weyn ee ka dibna waxaa dib ciyaaryahan DVD ama drive ciyaaro.
Xal kale la heli karo waxaa ka mid ah diinta DVD faylasha aad qaab faylka socon, heerka iyo sidoo kale codec in ay taageero u DVD ciyaaryahan ama wadid aad. Waxaad u badalo karaa online ama la Converter desktop ah; ku Video Ultimate Converter . Waa awood diinta ilaa 30X ka dhaqso badan Converter kasta oo kale oo la tayo leh sameecadda ah. Si fudud waxaad ka akhrisan kartaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo doorto video ah Converter xaq halkan.